သူငယ်တန်း | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
သငျသညျ O. အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့စက္ကန့်စကားသံကိုစစ်ဆေးချင်သောစကားလုံးမှစိစစ်အတည်ပြုစကားလုံး ...
သငျသညျဒုတိယစကားသံကို O. အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းစစ်ဆေးချင်သောစကားလုံးမှစိစစ်အတည်ပြုစကားလုံး ... ဒါကအတည်ပြုထားသောစကားလုံးမဟုတ်ဘူး။ မူလတန်းအဆင့်အတွက်များစွာသောစကားအတွက်, အတည်မပြုနိုင်သောအဖြစ်အဘိဓာန်နိုင်ရန်အတွက်ကြေညက်ကြသည် ...
သူငယ်တန်းအတွက်မိဘကော်မတီအလုပ်စုစည်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? နေ့သည်ကောင်းသော! သူငယ်တန်းအတွက်မိဘများ '' ကော်မတီက၏အနေအထားကိုဖတ်ရှုပါ။ 1 ။ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အလုပ်၏အကြောင်းအရာ။ မိဘများ '' ကော်မတီနိုင်ရန်အတွက်နေသူများကဖန်တီး ...
, ငါ့ကို rodnyeRuki ကောင်းသောကဗျာ, သီချင်းတွေကိုလက်စွဲ materiSkromnye လက်, မိမိလက်ကိုဖုံးအုပ်, ထန်း, ဆုံးရှုံးစားပွဲပေါ်မှာ lezhat.Sil အပေါ်ငြိမ်းချမ်းစွာလက်, မိမိအလက်ချောင်းများနာကျင်မှု hunching, terebyat.Byli သငျသညျတခါငယ်ရွယ်, နူးညံ့အနမ်းအသေးစားလက်ကိုင်ပဝါ .. .Laskovye စောင့်ရှောက်, ပြောပြကျေးဇူးပြုပြီး ...
Vygotsky ၏သွန်သင်သည်နှင့်အညီ, သူငယ်၏အမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဧရိယာကိုဖော်ပြရန်
သူငယ်၏အမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဧရိယာကိုဖော်ပြရန် Vygotsky Vygotsky ၏သွန်သင်သည်နှင့်အညီဟုတ်ကဲ့သငျသညျပွင့်လင်းနှင့်အရင်းအမြစ်ကိုဖတ်, သင်တစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူရဲ့စကားထဲကနေလေ့လာသင်ယူနေကြသနည်း ကလေးသူငယ်အခအောင်မြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်၏ Proximity ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန် ...
prompt karotkuyu သည့်ပုံပြင်များမှတစ်ဦးမိတ်ဆက်
prompt karotkuyu ဟာငါရှိဖူးပုံပြင်များ, ပျားရည်, ဘီယာသောက်သုံးရန်မိတ်ဆက်စကား။ နှုတျခမျးမှေးစီး, ဒါစပ်ထဲသို့မရခဲ့ပေ။ မကြာမီပုံပြင်ပြောပေမယ့်အလျင်အမြန်ပြုသောအမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ။ ဆိုရိုးစကားမရှိရင် ...
မည်မျှနှင့်မည်မျှနာရီသူငယ်တန်းမှအလုပ်မလုပ်ဖို့ရှိသည် ??? Rabo အချိန်ဇယားကို gc အုပ်ချုပ်ရေးရှိသည်။ များသောအားဖြင့်ဥယျာဉ် 8 ထံမှ 19 သို့မဟုတ်7မှ 18 မှဖွင့်လှစ်သည်။ ကျနော်တို့ ...
ရှင်းပြပါမည်သည့်လေ့လာမှုမဆိုအုပ်စုနှစ်စုကိုရွေးချယ်ပါသည်။ စမ်းသပ်အုပ်စုတွင်တိကျသောနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ တစ်ခုခုကိုဖန်တီးရန်အလုပ်ကိုလုပ်သောကလေးများပါ ၀ င်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုမှာ - ဘယ်သူ့ကိုမှထိုကဲ့သို့သော ...
မင်္ဂလာပါကျနော်ပေါ့သူငယ်တန်းထဲတွင်သူငယ်ဖို့အဖွားအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဇာတ်လမ်းကိုရေးဖို့ကိုကူညီပါ ... ကျွန်မအဖွားရှိသည်။ အီး ... ငါကeအလွန် ချစ်. ပေါ့! သူသည်လာသောအခါသူမအမြဲလက်ဆောင်တွေဆောင်တတ်၏ ...
တကယ်ပဲလေထုအကြောင်းကျမ်းပိုဒ်လိုအပ်ပါတယ်! လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေကလေးတွေလိုအပ်နှင့်အသုံးဝင်သော! ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းလျှောက်ဖို့အလွန်ပျော်စရာ! နှင့်မျှမရောဂါများ ... Oksanochka Krynina အသက်အားဖြင့်ငါ၌ထနိုးတဲ့အအေးချွေးအတွက်နှိုး ...
သူငယ်တန်းအဘို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးအပွအကြောင်းကိုသုတ္တံပစ်။ ခုနစျပါးသောရောဂါဟင်းသီးဟင်းရွက်ထံမှ၎င်း၏ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်သွန်နီအခါတိုင်းအခါတိုင်း။ (ရုရှားစကားပုံ) ဒါဟာစာရင်းပြုစုရန်တာရှည်ရန်လိုအပ်ပါသည် ...
ကျနော်တို့အရေးတကြီးကတော့ပဟေဠိလိုအပ်ပါတယ်! အဆိုပါရေမြှုပ်နိုင်ပါဘူးဘယ်မှာမရှိ domoet domylit မဟုတ်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ်တွင်အလုပ်, ငါသည်အယူ: ဒေါက်ဖိနပ်, တံတောင်ဆစ်ချိုး, ဆပ်ပြာနှင့်အတူပွတ်, သူ၏ဒူးတို့ကိုပွတ်, မေ့လျော့မနေပါနဲ့။ (ရေမြှုပ်) elasticity ...
, တစ်ဦးနွားစားခွက်ထဲမှာနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အကြှနျုပျကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါ! ဘယ်လိုအဟောင်းကလေးသူငယ်အခပျိုးခင်းအတွက်ယူတတ်သူမိမိကိုမိမိတတ်နိုင်ဖြစ်သင့်သလော
ကျေးဇူးပြုပြီးဒီနွားစားခွက်မှာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုပြောပြပါ ဦး ။ ကလေးတစ်ယောက်သည်ပျိုးခင်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားသောအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီ၊ သူကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ PRESCHOOL ပညာရေးဆိုင်ရာဌာနအတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ "မူကြိုပညာရေး ...
သူငယ်တန်းအလယ်တန်းအဖွဲ့အတွက်စာအုပ်များ "မြို့တော်" ကားလ်မာ့က်စ်အတွက်သူငယ်တန်းမှဆရာကိုမေးပါ "ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်။ " အသက်အရွယ်အုပ်စုတိုင်းအတွက်စိတ်ကူးယဉ်စာရင်း - ကဗျာ၊ ပုံပြင်၊
သူငယ်တန်းအဘို့အဆပ်ဖို့အကျိုးကျေးဇူးများထားသလော မသန်စွမ်းကလေးများ (သင့်လျော်သောအကူအညီဖြင့်မသန်စွမ်းကလေးများအတွက်) ကြီးမားသောမိသားစုများ၏သားသမီးများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အတာဝန်ခံအခမဲ့သူငယ်တန်းကိုသွား 50% ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ် ...
ထောင်ပြီးမြွေ, ပုံမှန်အတိုင်း: နှင့် syllables သို့ခွဲခြား
ထောင်ပြီးမြွေ, ပုံမှန်အတိုင်းထောင်ပြီးမြွေ, ပုံမှန်အတိုင်း: နှင့် syllables သို့ပိုင်းခြားလေ၏။ Gnome တဦးတည်း syllable စွန်-ငါသရအက္ခရာဒါအသံဘယ်နှစ်ယောက်ဟူသောစကားလုံးအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသော syllables နှစ်ခုနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း syllables နှင့်ရအက္ခရာအဖြစ်ပေါ်-kun နှစ်ခုရှိပါတယ် ...
6 -7လအရွယ်မှ စ၍ ကလေးငယ်သည်၎င်းဝန်းကျင်ရှိကမ္ဘာကိုမျက်စိအာရုံ၊ နား၊ နား၊ အနံ့၊ အရသာခံစားမှုစသည့်အာရုံခံအင်္ဂါများသာမကတက်ကြွစွာလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
သားသမီးရဲ့ဖန်တီးမှုယှဉ်ပြိုင်ဘို့ပြဌာန်းချက်အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? ထိုကဲ့သို့သောအများဆုံးမူရင်းထုပ်ဖန်တီးမှုအကျင့်ကိုကျင့်၏အများဆုံးမူရင်းထုပ်အထွေထွေပြိုင်ပွဲအဖြစ်ဖန်တီးမှုအကျင့်ကိုကျင့်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ်အမည်စည်းမျဉ်းဌာနမှူး MBDOU __________ ... by: Approved
အဘယ်အရာကိုသူငယ်တန်း Rospotrebnadzor check လုပ်ပေးပါတယ်?
အဘယ်အရာကိုသူငယ်တန်း Rospotrebnadzor check လုပ်ပေးပါတယ်? သငျသညျဖြစ်ကောင်းကရုရှားစားသုံးသူကြီးကြပ်မှုနှင့်ရုရှားပညာရေးဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုမဟုတ်ပါ, အခြိနျနာရီ mistook ။ လေးစားလိုက်နာ SanPin ။ လူအပေါင်းတို့သည်မဂ္ဂဇင်းများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာအုပ်များ, သင်ခန်းစာများကိုဇယားကွက် mode ကို Keeping ...
တစ်မိန့်ခွန်းကုထုံးအကြောင်းကိုလှပသောကဗျာတစ်ပုဒ်။ အလွန်အရေးတကြီးလိုအပ် !!! ဝေမျှမယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး !!!
မိန့်ခွန်းဆရာနှင့်ပတ်သက်သောလှပသောကဗျာများ။ အလွန်အရေးတကြီးလိုအပ် !!! မျှဝေပါ ကျေးဇူးပြုပြီး !!! သည်းခံခြင်းနှင့်တီထွင်ခြင်း၊ ဇွဲရှိခြင်းနှင့်အောင်ခြင်း - ဤသည်မှာစကားပြောကုထုံး၏အဓိကအဆင့်ဖြစ်သည်။ အားလုံး Nadi, Vani, Viti စကားပြောရမည်, ...
တစ်ဦးသူငယ်တန်းဆရာမများအတွက် Sanminimum ။ ကန့်သတ်များ၏ပညတ်တော်အတိုင်း။
သူငယ်တန်းမှဆရာအတွက်အနည်းဆုံး။ ကန့်သတ်ချက်အထုံးအဖွဲ့။ ) ဤတွင် 2013 ၏ SanPiN အသစ်ဖြစ်သည်။ မေလရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆရာဝန်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ "အတည်ပြုချက်အရ ... "
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,764 စက္ကန့်ကျော် Generate ။